harun1983 | Oromo Land
All posts by harun1983
December 24, 2015 harun1983	Leave a comment
Umanni Oromoo jarraa tokkoof eenyumaa fi abbaa ubiyyummaan isaa tufatamee jiraata ture. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira.kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota nannoo Finfinnee jiranitti deefatee maqaa master pilaanii jedhuun lafa gurguruun qotee bulaa buqisuun Ummata keenyaa barbadeessuuf qophii irra akka jiru irra gahamee jira. lafa gurguruun faaydaa Ummata Oromootiif fidu hin jiru.misooma nannoo Tigraay kisii samtootaa gabisuuf yoo ta’e malee, garuu rakkoo kanaaf kan saxilamaan Ummatnni Oromoo aadaa, afaan fi eenyummaan isaani akkasumas tokkummaa keenya dhabamsiisuuf daba hojatameedha.
Maqaa fi seenaan nannoo fi magaalaa akka jijiramuu karaa OPDOn mirkaneessuun ragasisaa jira.namoonni seenaa isaanii osoo hin qoratin kan of dhoksan gegesitoota OPDO kan ta’anii fi hambaa motumma dargii kan turan kan akka Abbaa Duulaa Gamadaa fi Kumaa Damysaa akkasumas komishinara polisii kan ture obbo Warqinaa Gabayoo fi peresedantii naannoo oromiyaa obbo Muktaar kadiir ummata keenya irratti rakkoo guddaa uumaa jiru.geegesitoota wayyaanee kessaa tokko kanta’e obbo Abbaay STahayyee tuffii ummata keenya irratti qabu afaan isaatiin jalatanis jibitanis master pilaaniin hojii irra ni oola jedhee dhaadachuun isaa ni yaadatama.OPDOn har’as akka Goobana Daachee garaa isaaniitiif jecha ummata keenyaa gurguraa jirti.
Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba’laa irra buqisaa jiru.hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf duguggaa sanyii rawatamaa jira.
akuma seenan nutti himutti kanaan dura ummanni naanoo kana kolonii mootummaa abbaa irree drbaniin wareera guddaa isaan irratti rawatamaniin abbaa biyummaa isaanii fi eenyummaa isaanii akka dhaban ni yadatama. yeeroo sana ummanni nannoo kanaa aarsa lubbuu bayyee kafalanii turan, kana ta’us motummoonni abbaa irree kuniin gargaarsan motummoota dhihaa irraa argataniin meeshaa waraana ammayyaatiin fayadamuun ummata keenya bitaa turan kana wajiin walqabatee dhalootan abbaa biyyumaa kan ta’an qe’ee isaani irraa buqisuun ofii isaanii fi namoota hawaasa biraa nannoo biraa irraa fidanii qubsiisan qabeenyaa umamaa fi lafa gabbataa nannoo kanaa barbadessuun haala qabiyyee isaa jijira turan. har’as wayyaaneen tooftaa cimaa fayadamuun kolanii ammyyaa ta’een ummata Oromoo irratti cubbuu rawachaa jira. kanas labsii dhihoo master pilaanii jedhuun bu’aa yaada kanaa ta’uu isaa nuuf mirkaneessa. bitamtootaa fi garaan bultoota OPDO murasatti fayadamuun ummata bal’aa fayyalessa kana daran dararaa jiru. bitamtoonni kuniin faydaa isaniitiif jecha sanyii fi gosa isaani sirna nama nyaataa ta’e kanaaf dabarsanii kennuun isaanii midhaa hangana hin jedhamne ummata keenya irratti raawataa jiru. wayyaaneenis namoota mallatoodhaaf taa’an kanaan raggaasisuun ummata bal’aa hundeen buqisuuf seera daba tumaa jirti.
kanaaf nuti ummanni oromoo hundi keenya sirna nama nyaata wayyaanee kana balaalefachuun sochiin hamaan kun akka hojjii irra hin oolle jabaannee wal bira dhabbachuu qabna. har’a yoo cal’ifnne bor ummata fi lafa oromiyaa jedhamu lafa irraa dhabamsiisu agarsiisa. suuta suutan magallonni tokko tokko gara fedraalatti jijiramuuf deemu, gariin gara ollawanitti daangefamuuf adeemaa jira. warroonni kaleessa waan nyaatan dhabanii buurii dhagaa jalaa fi awwaanisa nyaata turan har’a aanan, dammaa fi foon coomaa Oromoo nyaatanii kokkeen isaanii hagugamee ummata isaan nyaachisee, kunuunsee, kabajee, jirachise ganuudhaan badii guddaa irratti rawachaa jiru. walakkaa isaanii mana hidhaatti walakkaa isanii OPDOn sabebefachuun ummata oromoo fixaa jiru. kanaafuu ummanni keenya sirna hamaa kana hundee irraa buqisuun ofii irra darbanii injifannoo filannoo hin qabneedha. haala kanaan ummanni oromoo yoo harka walqabatee qabsaa’e yeeroon walabummaa fi dimokraasii ofiitiin gonfatu fagoo akka hin taane qaanqeen bilisummaa mul’ataa jirti.
You can contact the writer AMANUEIBADANE2015@GMAIL.COM
Addaa Bilisummaa Oromoo Umatoota Itophiyaa Hundaaf!
December 15, 2015 harun1983	Leave a comment
Muddee 14, 2015Addaa Bilisummaa Oromoo
–Ibsa Guutuu – Afaan Oromoo
–Full Document – Amharic version